Hogaanka SSC Iyo Garaadada Beesha Dhulbahante Oo Qaadacay Shirka Taleex | FooreNews
Home wararka Hogaanka SSC Iyo Garaadada Beesha Dhulbahante Oo Qaadacay Shirka Taleex
Hogaanka SSC Iyo Garaadada Beesha Dhulbahante Oo Qaadacay Shirka Taleex
Taleex (Foore)Garaadada beesha Dhulbahante oo ay hogaaminayan Garaad Saleebaan Garad Maxamed Iyo Garaad Abshir ayaa manta maalintii seddexaad ku guda jira shir uga socda magaaladda Taleex dhexdeeda. Shirkaas oo ay kaga arrinsanayan go’aankii ay ka qaadan la ahaayeen shirka ka socda Taleex iyo dhawaaqa maamul goboledka ee kazoo yeedhay shirkaas.
Shirka garaadada oo ka socda aqalka uu Taleex ka degan yahay Garaad Saleebaan garaad Maxamed ayaa la sheegayaa in garaadadu kaga shirayan khilaaf u dhexeeya iyaga iyo guddida shirka Taleex hagaysa oo loo yaqaan G6. Garaadada ayaa ku eedeeyayay gudidas inay shirkii marin habaabiyen, isla markaana dano gaar ah ka wataan.
Warar xog ogaal ah oo aanu ka helayno garaadada ayaa sheegaya inay ku talo jiran garaadadu in ay bayaan ka dhan ah kooxda G6 soo saaraan.
Garaadada ayaa dhamaantood isku raacay in aysan aqbali karin wax lagu sheego maamul goboleed oo shirkaa lagaga dhawaqo. Garaadadan sida adag uga soo horjeeda maamul goboleedka ayaa la sheegaya inay yihin kuwa gacan saar la leh maamul goboledka Puntland. Halka qaar kalena u arkaan maamul goboleedkan lagu dhawaqaya inuu xasiloni daro u keeni karo beeshoda.
Dhanka kale hogaanka SSC Xagla Toosiye iyo Cali Sabarey ayaa yaguna sidoo kale shalay ka baxay shirk aka socda Taleex, isla markaana ku dhowaqay inay kazoo horjeedan go’aan kasta oo shirkas lagu qaato. SIdoo kale ciidamada Xagalatoosiye ayaaa rasaas fariin ah cirka u ridayay manta ilaa shalay iyadoo ay ku hanjabeen in ay awood kula wareegidoonaan madasha shirka hadaan wax laga bedelin qaabka shirku u socdo imika.
Previous PostCali Waran Cadde oo Gaashaanka Ku dhuftay Go’aan Ku simaha UDUB xilkii kaga qaaday Xoghayihii Xisbigaas Next PostMadaxweyne Siilaanyo oo xilkii ka qaaday afar badhasaab, kuwo cusubna magacaabay